Tilmaamaha Socdaalka Xalaal ee Osaka - Osaka Tilmaamaha Safarka Muslimiinta
Ōsaka (大阪) waa magaalada saddexaad ee ugu weyn Japan, oo leh dad ka badan 17 milyan oo qof oo ku nool aaggeeda weyn ee weyn. Waa magaalada weyn ee magaalada Kansai waana tan ugu weyn Osaka-Kobe-Kyoto trio.
Cusboonaysiintii ugu dambeysay: Sebtember 27, 2021 8:30 PM +08
"Osaka" wuxuu macnaheedu noqon karaa mid ka weyn Osaka (gobolka) (大阪 府) Akasaka-fu), oo lagu daboolay hage gaar ah, ama bartamaha magaalada Osaka (大阪 市 Akasaka-shi), mawduuca tilmaamahan. Magaalada waxay maamul ahaan u qaybsan tahay 24 waardi (区 ku), laakiin isticmaalka guud qeybaha soo socda ayaa ka waxtar badan:
Osaka waa magaalo weyn oo ku taal bartamaha Kansai oo ku taal jasiiradda weyn ee Japan - Honshu, waana astaamo mashquul badan oo ka soo horjeedka bilowga ah iyo soo jiidashada geesaha. Magaalada 3-aad ee ugu weyn Japan, waxaa si weyn loogu tixgeliyaa inuu yahay halbawlaha dhaqaalaha ee muhiimka ah ee degmada Kansai wuxuuna jiray qarniyo kahor.
Taariikhda ayaa ku dhex jirta oo ceyriin leh dabeecad ahaan, Osaka wuxuu leeyahay khayaano maandooriye ah, oo caan ku ah kaliya shaqadeeda aadka u adag ee aan macquul ahayn, laakiin cunnooyinkeeda cajiibka ah iyo nolosha habeenkii ee firfircoon.
Jaleecada hore, waxaa lagugu qaldin karaa inaad u maleyneyso in Osaka uusan dhab ahaan laheyn aqoonsi casri ah oo waligiis ifaya Tokyo hasa yeeshe, waxaadba isla markiiba si farxad leh ula yaabi doontaa. Waxay leedahay xoog u gaar ah oo gaar ah iyo xamaasad kaa guuleysan doonta adiga oo garaaca wadnaha ah. Magaalooyinka dhaqameed waxay ka soo galaan oo ka baxaan inta udhaxeysa qaab dhismeedka goosgooska ah ee xiisaha leh ee ku wareegaya degmooyinka dukaamaysiga dhulka hoostiisa iyo taallooyin mustaqbal leh, oo leh muuqaal dhammaystiran oo leh dhir doog leh oo ku baahsan magaalada oo dhan.
Dadka Osaka waa qayb muhiim ah oo kala duwan oo ka mid ah garaaca wadnaha magaaladan firfircoon - soo dhaweyn iyo buuq; Xaqiiqdii waxay yaqaanaan hal ama laba shay oo ah qaadashada dhinac kasta oo nolosha wanaagsan ah. Osakajins waxay tixgeliyaan lahjadooda diirran iyo tan gaarka ah inay ahaadaan xoogaa dhaxal qaran, waxayna si aad ah ugu faanaan shakhsiyaddooda.
Markii aan soo marnay xoogaa isbeddello iyo horumar ah, waa iska cadahay gacanta casriga ah ee kaabayaasha dhaqaale inay meel walba taalo, laakiin waxay ka dhigtay magaalada mid aad ugu fudud socodsiinta iyo sahaminta meelaha iyo meelaha laga soo galo magaalooyinka bilicda san. Japan.
Kuwa kale (キ タ)
Xarunta cusub ee magaalada, oo ay ku jiraan qaybta Kita (北区). Umeda (梅田) waa xarunta ugu weyn. Dukaammada waaxda, tiyaatarada iyo dukaamada ayaa ku urursan agagaarka JR Osaka Station iyo Umeda Station, oo u adeegta magaalooyin badan iyo tareenno gaar loo leeyahay.
Xarun dhaqameedka ganacsiga iyo dhaqanka, oo ka kooban waaxyada Chuo (中央 区) iyo Naniwa (浪 速 区). Namba (な ん ば, 難 波) waa saldhiga tareenka ugu weyn, agagaarka agagaarkiisana wuxuu leeyahay dukaanka weyn iyo dukaamaysiga riyooyinka ah. Shinsaibashi (心 斎 橋) iyo Horie (堀 江) waa aagga moodada. Dōtonbori (道 頓 堀) waa meesha ugufiican ee loo aado qaniinyada la cuno. Semba (船 場) wuxuu xariiqayaa khadka u dhexeeya Kita iyo Minami, waxaana ku jira degmooyinka ganacsiga ee Yodoyabashi (淀 屋 橋), Doujima (堂 島) iyo Hommachi (本 町); iyo degmada dhaqaalaha ee Kitahama (北 浜).
Guud ahaan waxaa loola jeedaa aagga agagaarka Saldhigga JR Tennōji, Saldhigyada tareennada dhulka hoostiisa mara ee Abeno iyo Tennoji iyo khadadka tareenka ee Kintetsu dhammaadka koonfureed ee qaybta Tennōji Qeybta waxaa loogu magac daray macbadka taariikhiga ah ee Shitennoji. Tennōji Park iyo Zoo ayaa ku yaal aagga. Galbeedka Tennōji waa Shinsekai (新世界), oo ahayd aag madadaalo waagii hore hadana noqday mid aad u abuur badan.
Qalcadda Osaka (大阪 城) waa mid ka mid ah meelaha ugu dalxiiska badan dalxiiska Japan. Kyōbashi (京 橋) waa waqooyi-bari ee Osaka Castle, guriga ay ku taal Beerta Ganacsiga ee Osaka (OBP)
Oo daboolaya aagga waqooyiga Osaka. Waxaa ka mid ah Shin-Osaka(新 大阪) iyo Juso(十三)
Xaafadaha bari ee Osaka.
Xaafadaha koonfureed ee Osaka oo ka kooban degmooyin kala duwan, oo leh Sumiyoshi-Taisya Grand Shrine.
Aag madadaalo weyn oo leh xarumo waaweyn oo waaweyn.
Hadday Tokyo tahay JapanCaasimaddiisa, waxaa laga yaabaa in loogu yeero Osaka magaala-madaxdeeda. Wax kasta oo aad ugu yeerto, hase yeeshe, waxaa jira fursado badan oo aad adigu ku ogaan karto dabeecad-diidka runta ah.
Osaka wuxuu dib ugu soo laabtay xilligii Asuka iyo Nara. Magaca hoostiisa Naniwa (難 波), waxay ahayd caasimadii hore ee Japan laga soo bilaabo 683 ilaa 745, muddo dheer ka hor dabaqyada kore ee Kyoto. Xitaa ka dib markii caasimada loo raray meelo kale, Osaka wuxuu sii waday inuu door muhiim ah ka ciyaaro isagoo xarun u ah isu socodka dhulka, badda iyo marinka kanaalka. (Eeg "808 Bridges" infobox.) Intii lagu jiray xilligii Tokugawa, halka Edo (hadda Tokyo) ay u adeegi jirtay kursiga adag ee awoodda millatariga, Kyoto-na waxay ahayd guriga maxkamadda Imperial iyo maxaakiimteeda, Osaka wuxuu ahaa "Jikada Nationka" (「天下 の 台 所」 tenka-no-daidokoro), barta ururinta iyo qaybinta ee bariiska, cabirka ugu muhiimsan ee hantida. Markaa sidoo kale waxay ahayd magaaladii ganacsatadu ka samaysteen oo ay ku lumiyeen hantidooda isla markaana ay si farxad leh ugu dhega-adaygeen digniino isdaba-joog ah oo uga imanayay shogunate-ka si loo yareeyo isticmaalkooda muuqda.
Intii lagu jiray xilligii Meiji, ganacsatadii aan cabsida lahayn ee Osaka waxay hoggaanka u qabteen horumarinta warshadaha, taasoo ka dhigaysa mid la mid ah tii Manchester ee Boqortooyada Ingiriiska Duufaan dhammaystiran oo ka dhacday Dagaalkii Labaad ee Dunida ayaa ka tagtay caddayn yar oo la soo dhaafay - xitaa qalcaddu waa dib-u-dhis dib u dhis - laakiin ilaa maantadan la joogo , Iyadoo aan rafcaan iyo murugo laga helin dusha sare, Osaka ayaa weli ah JapanMeesha ugu fiican ee wax lagu cuno, lagu cabo oo lagu caweeyo, iyo halyeey (hadaan ficil ahaan aheyn) Osakans wali wey isa salaamayaan mōkarimakka?, "Lacag ma heleysaa?".
Albaabka caalamiga ah ee laga baxo Osaka waa Madaarka Caalamiga ah ee Kansai. Gegada diyaaraduhu waxay leedahay laba isku xir tareen oo magaalada aada: JR West's Kansai Line Line iyo midka gaarka loo leeyahay ee Nankai Electric Railway.
Dhowr tigidhada tigidhada ah oo laga helo Kansai Airport ayaa la heli karaa, kuwaas oo rafcaan u noqon kara martida ajaanibta ah
Tareenka Japan (JR) wuxuu bixiyaa ICOCA & HARUKA xirmo tigidh dalxiisayaasha ajnebiga ah oo keliya. ¥ 3030 hal-dhinac ama 4060 2000 safar-wareeg ah waxaad kuheleysaa safar aan lagaa ilaalin karin oo kuyaala Haruka xaddidan, waxaadna kusii socon kartaa saldhig kasta oo JR ah oo Osaka ah oo kuyaala aag loogu talagalay. Waxa kale oo aad helaysaa card 1500 kaar oo ah ICOCA kaar ah oo aad ugu isticmaasho transit-ka gobolka Kansai (¥ 500 + deposit 1190 dhigaal ah). Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa tikidhada JR hal-dhinac mashiinnada tigidhada; XNUMX XNUMX ilaa Saldhigga Osaka. Qaar kaararka caalamiga ah lagama yaabo inay ka shaqeeyaan mashiinnada tigidhada iyo lacag ayaa lagama maarmaan noqon doonta.
Nankai Railways waxay bixisaa a Tigidhada Kanku Chikatoku ¥ 1000 kasta, lacag kali ah miiska tikidhada tareenka ee Nankai (raadi calaamadaha cas) (Mar 2019). Tan waxaad ku safri kartaa adeegga tareenka ee Nankai ee Namba, ka dibna waxaad u safri kartaa saldhig kasta oo ku yaal dhammaan nidaamka Tareenka 'Osaka Subway'. Tareenku wuxuu ka baxayaa garoonka diyaaradaha Kansai kuna sii jeedaa saldhiga Namba wuxuu qaadanayaa ku dhowaad 45 daqiiqo.
xGegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Osaka (Sidoo kale loo yaqaan Gegada Diyaaradaha Itami,). Inta badan duulimaadyada gudaha waxay yimaadaan Itami. Waxay ku xiran tahay Osaka Monorail, laakiin monorail -ku waa qaali wuxuuna raadiyaa qaanso ku wareegsan xaafadaha waqooyi, sidaa darteed si aad u tagto Bartamaha magaalada waxaad u baahan doontaa inaad u wareejiso khadka tareenka ee Hankyu ee magaalada hareeraheeda ah. Ikhtiyaarka ugu habboon ee badankoodu waa Basaska Limousine Airport, oo si joogto ah uga socda Itami una socda meelo kala duwan oo ku yaal Osaka iyo meelo kale oo gobolka ka mid ah (oo ay ku jiraan Madaarka Kansai), iyadoo qiimahoodu bilaabmayaa qiyaastii -500 600-4000. Tagsi ka timaada gegida dayuuradaha ee Itami ilaa aagga qalcadda taariikhiga ah ee Osaka wuxuu ku kacayaa ¥ 700 oo lagu daray ¥ XNUMX waddada lacagta laga qaado.
Tokaido iyo Sanyo Shinkansen (Tareenada 新 幹線 arrive ayaa imanaya Shin-Osaka saldhigga, waqooyiga bartamaha magaalada. Laga soo bilaabo Shin-Osaka, waxaad kula xiriiri kartaa bartamaha magaalada adoo isticmaalaya khadka tareenka ee dhulka hoostiisa mara ee Midosuji, ama ku xirmi kara shabakadda JR ee maxalliga ah meelaha kale.
Laga soo bilaabo Tokyo, Nozomi (の ぞ み) tareenadu waxay daboolayaan wadada kaliya ee loo maro qiyaastii 2 saac 15 daqiiqo (¥ 14,050); Xikari (ひ か り) tareenadu waxay qaataan 3 saacadood iyo wax walba oo istaaga Kodama (こ だ ま) tareenadu waxay qaadanayaan 4 saacadood (labaduba waa 13750 XNUMX). Marka la raaco Wadada Tareenka ee Japan, wax lacag ah lagama qaadayo qaadashada Shinkansen haddii aad isticmaasho Xikari or Kodama adeegga.
Laga soo bilaabo dhibcaha galbeedka Osaka, Nozomi tareenadu waxay ka baxaan Okayama (¥ 6060, 45 daqiiqo), Hiroshima (¥ 10,150, 80 min) iyo xarunta Hakata ee Fukuoka (¥ 14,890, 2 2 hr 15 min). Kuwa haysta Jidka Tareenka ee Japan ayaa isticmaali kara Sakura (さ く ら) ama Xikari adeegga halkii, kaas oo ku socda xawaare u dhigma kan Nozomi oo wuxuu sameeyaa dhowr joogsi oo dheeri ah, laakiin tareenadiisu way gaagaaban yihiin (8 tareen oo baabuur ah, marka la barbar dhigo 16 baabuur oo saaran Nozomi). Ka gaabiya Kodama tareenadu waxay isku xiraan saldhigyada intiisa kale wadada.
Sakura tareenadu waxay ka bilowdaan Kyushu, adeegga Osaka waxaa laga heli karaa Kumamoto (¥ 18,000, 3 hr 15 min) iyo Kagoshima (¥ 21,300, 4 saacadood). Mizuho (み ず ほ) tareenadu wax yar ayey ka dheereeyaan waxyarna ka qaalisan yihiin. Haddii aad leedahay Tareenka Japan Ka Gudub Mizuho lama isticmaali karo.
Tigidhada dhimista ayaa horay loo sii iibsan karaa Japan Sarkaalka Tareenka App SmartEX, oo lagu heli karo Ingiriisi iyo luqado kale - raadi Hayatoku qiimaha
Hadaad ka safreyso bariga adoon lahayn tareen tareen, waad ka faa'iideysan kartaa Puratto (Platt) Kodama Tigidhka, kaas oo bixiya qiimo dhimis adeegyada Kodama haddii aad iibsato ugu yaraan hal maalin ka hor. Waxaad heleysaa kursi kuu banaan iyo kuubo cabitaan bilaash ah (oo ay ku jiraan biir) kaas oo laga soo iibsan karo barta "Kiosk" ee ku habboon saldhiga. Tigidhkan safarka ah ee Tokyo ilaa Shin-Osaka wuxuu ku kacayaa, 10,300 - keyd ahaan waa ku dhowaad 4000 4300. Waxaa jira hal adeeg oo Kodama saacadiiba oo ka yimaada Tokyo, dhowr tareen oo Kodama ah oo aroortii hore ayaan lagu isticmaali karin tikidhkan. Ka safridda Nagoya oo tikidhkaani ku kacayo ¥ XNUMX.
Inta lagu jiro xilliyada safarka marka Seishun 18 Tigidhada waa ansax, waxaad ka tagi kartaa Tokyo ilaa Osaka inta lagu jiro maalinta qiyaastii sagaal saacadood adoo adeegsanaya tareenada maxaliga ah. Ku safrida koox, si kastaba ha noqotee, qiima dhimista qiimaha si aad ah ¥ 8500 qiimaha: Xisbi ka kooban saddex kharash 3800 XNUMX qofkiiba, iyo koox ka kooban shan qof oo wada socda ayaa qiimaha hoos u dhigaya 2300 XNUMX qofkiiba. Eeg maqaalka tikidhada Seishun 18 wixii macluumaad dheeraad ah.
Kuwa ka socdaalaya gobolka Chubu way isticmaali karaan Thunderbird (サ ン ダ ー バ ー ド) tareeno xaddidan oo ka yimaada Kanazawa (2 hr 45 min, ¥ 7650). Kanazawa waa terminalka hadda ee Hokuriku Shinkansen, oo ku xiraya Toyama, Nagano iyo Tokyo.
Waxaa jira khadad tareen oo badan oo isku xira Osaka iyo magaalooyinka u dhow:
Laga soo bilaabo Kyoto, JR waxay bixisaa dhakhso, laakiin waxyar ka qaalisan, shin-kaisoku (tareen degdeg ah oo gaar ah) oo taga Saldhigga Osaka. Beddelka ka raqiisan laakiin gaabis ah ayaa ah adeegga xaddidan ee Hankyu Railway. Labaduba waxay ku dhammaadaan aagga Umeda ee Osaka. Tareenka Keihan wuxuu bixiyaa tareenada Kyoto-Osaka. Tareenka Yodoyabashi ee Osaka si toos ah uguma xirna JR, laakiin waxaa suurtagal ah in loo wareejiyo JR Osaka Loop Line ee Kyobashi. Magaalada Kyoto, tareenada Keihan iyo Hankyu kuma xirna JR Kyoto Station laakiin labaduba waxay u safraan saldhigyada kuwaas oo aad ugu habboon in la gaaro Bartamaha magaalada. 30-45 daqiiqo.
Laga soo bilaabo Kobe, JR waxay mar labaad bixisaa adeeg ka yara dhakhso badan kana yara qaalisan Hankyu. Xulashada seddexaad waa Hanshin Railway, oo u dhiganta Hankyu xaga qarashka iyo wax lamid ah waqtiga, faa iido u leh helitaanka garoonka Koshien si aad u aragto ciyaaraha Hanshin Tigers. Saddexda sadarba waxay aadaan Osaka / Umeda. qiyaastii 20 daqiiqo.
Laga soo bilaabo Nara, JR waxay bixisaa tareenno aada Tennōji iyo Osaka Stations, Kintetsu waxay tareenka siisaa Namba. Saldhigga Kintetsu ee Nara wuxuu ku dhow yahay Tōdaiji iyo Nara Park. 35-45 daqiiqo.
Laga soo bilaabo Nagoya, beddelka Shinkansen waa adeegga xawaaraha xadidan ee Kintetsu, ee ah Safka Magaalada (ア ー バ ン ラ イ ナ ー) oo si toos ah ugu socota Namba. Waqtiyada safarku way yar yihiin laba saacadood jidkiiba, iyadoo bixitaanku yahay 0 iyo 30 daqiiqo saacaddii dhaaftay oo lagu qiimeeyay of 4150. Marka la barbardhigo, shinkansen wuxuu ku qaadanayaa wax ka yar saacad ¥ 5670.
Xarumaha oo isku magac ah laakiin ka tirsan shirkado tareen oo kala duwan ayaa mararka qaarkood ku yaal meelo kala duwan. Tusaale ahaan, ka Nakatsu saldhigyada Hankyu iyo shabakadaha dhulka hoostiisa mara waxay qiyaastii u socdaan socod 10 daqiiqo ah midba midka kale. U oggolow ilaa nus saac inaad ku dhex socoto noocyada kala duwan Umeda saldhigyada iyo ku saabsan isku mid ah ee kala duwan Namba idaacadaha, gaar ahaan haddii aad tahay booqde markii ugu horreysay.
In Kobe ah Sannomiya saldhigyada ay leeyihiin JR iyo Hankyu waa isku xiran yihiin laakiin Hanshin Sannomiya waxay ka soo horjeedaa waddo.
The Hokuriku Arch Pass waxay u oggolaaneysaa socdaal aan xadidneyn inta udhaxeysa Tokyo iyo aagga Kansai oo loo maro gobolka Hokuriku, iyadoo la adeegsanayo Hokuriku Shinkansen min Tokyo ilaa Kanazawa iyo Thunderbird Kanazawa ilaa Kyoto iyo Osaka. Qiimaha ¥ 24000 toddobada maalmood ee safarka isku xiga (¥ 25000 haddii gudaha laga iibsado Japan), Arch Pass wuxuu ¥ 5000 ka jaban yahay kan qaranka Japan Wadada Tareenka. Dhinaca kale, safar ka taga Tokyo ilaa Osaka ayaa labalaab ka dheer Kanazawa marka loo barbardhigo midka caanka ah ee Tokaido Shinkansen
Tareenada habeenkii waxay ahaan jireen mid ka mid ah sharafka shabakada tareenka, laakiin qalabka tareenka ee gaboobay oo ay weheliso tartanka u dhexeeya basaska iyo shinkansen waxay keeneen in laga takhaluso dhammaan adeegyadii u socday Osaka.
Kaliya hal tareen maalinle ah ayaa haray: The Qorrax ka soo baxa Izumo / Sunrise Seto, kaas oo sii mara Osaka isagoo kusii jeeda gobolada Chugoku iyo Shikoku. Nasiib darrose, waxay faa'iido u yeelan kartaa oo keliya inay tahay safar loogu safro ama looga dhoofo Tokyo. Adeegga maalinlaha ah ee socdaalku wuxuu rakaab ka qaadaa Osaka markay tahay 12:34 AM, wuxuuna imaanayaa Yokohama 6:44 AM iyo Tokyo 7:08 AM. Adeegga maalin walba u socdaala galbeedka ee Tokyo (10:00 PM) iyo Yokohama (10:23 PM), dhanka kale, ha joogsan Osaka gabi ahaanba - joogsiga subaxdii ugu horreysay wuxuu ku yaalaa Himeji 5:25 AM. Laga soo bilaabo Himeji, waa inaad dib ugu laabataa Osaka adeegga socdaalka ama shinkansen ee tigidh gaar ah.
Haddii aad leedahay a Japan Wadada Tareenka, waxaad ka ballansan kartaa sagxad sagxad dhulka dhiganta adeegga kor ku xusan lacag la'aan. Haddii kale waad ku safri kartaa qol ama qol adoo bixinaya khidmadda khuseysa qolka iyo khidmadaha dheeraadka ah. Laga soo bilaabo Himeji waxaad awoodi doontaa inaad dib ugu laabato Osaka tareen tareen raaca, ama kursi aan la dhigin marka hore Kodama adeegga shinkansen ee maalinta, si fudud adoo tusaya kaarkaaga.
Inta lagu jiro xilliyada safarka ugu sarreeya, JR waxay qabataa adeeg habeennimo la yiraahdo Dayax-gacmeedka Nagara inta udhaxeysa Tokyo iyo Ōgaki ee Gifu (gobolka), oo ay tahay inaad uga sii gudubto Osaka tareenada caadiga ah. Ku Nagara waxaa isticmaali kara dadka heysta Tigidhada Seishun 18, natiijadaasna, waxay ku jirtaa baahi aad u sareysa markay socoto; boos celinta boosaska waa qasab.
Inta lagu jiro fasaxyada Jaamacadda waxaa jira adeegyo dheeraad ah oo habeen ah oo loogu talagalay Matsuyama, Kochi iyo Fukuoka. Sida kuwan loo tixgeliyo degdeg ah Adeegyadu waxay noqon karaan kuwo dhaqaale ahaan aad u sarraysa haddii aad isticmaasho Tigidhada Seishun 18.
Ku guuldareysiga kuwan oo dhan, safarka habeenka waxaa lagu sameyn karaa joogso magaalo kale inta lagu jiro, taas oo fudud in lagu sameeyo Japan Wadada Tareenka ama tigidhka masaafada dheer ee aasaasiga ah ee shaqeynaya muddo dhowr maalmood ah.
JR Highway Buses waxay ka mid yihiin shirkado badan oo sameeya basaska maalinlaha ah inta udhaxeysa Tokyo iyo Osaka.
Maaddaama Osaka ay tahay magaalo weyn, waxaa jira basas badan oo maalin iyo habeen ah kuwaasoo dhex mara Osaka iyo meelo kale oo dhan Japan, kaas oo noqon kara bedel ka jaban qiimaha tikidhada shinkansen.
Basaska Osaka ayaa taga oo ka soo qaada hal ama in ka badan oo goobo kala duwan ah oo ku baahsan magaalada oo dhan, sidaa darteed hubi inaad hubiso faahfaahinta ka hor intaadan safrin safarka. Qaar ka mid ah joogsiyada waaweyn ee ay basasku isugu yimaadaan waxaa ka mid ah JR Jidka Weyn ee Baska Saldhiga Osaka ee basaska JR, ee Terminalka Baska ee Willer Dhismaha Sky Umeda, iyo Terminalka Hawada ee Osaka (OCAT) Xarunta Namba. Qaarkood sidoo kale way u adeegaan Saldhigga Shin-Osaka tareenada rasaasta, iyo Universal Studios Japan.
Laga soo bilaabo Tokyo
Orodka u dhexeeya Tokyo iyo gobolka Kansai ayaa ah kan ugu mashquulka badan Japan. Basasku waxay isticmaalaan Tomei ama Chuo Expressway oo ka yimaada Tokyo ilaa Nagoya, ka dibna Meishin Expressway ilaa Osaka. Safarradu waxay qaadanayaan 8 ilaa 9 saacadood iyadoo kuxiran wadada iyo joogsiga.
Loolanka adag ee u dhexeeya wadayaasha ayaa horseeday basaska bixiya adeegyada wanaagsan iyo qiimaha hoose. Qeyb ka mid ah istiraatiijiyaddani waa korsiga qiimaha firfircoon ee waddooyinka basaska badan. Tani guud ahaan waxay ka dhigan tahay safarada maalinlaha ah, safarada maalmaha shaqada, tikidhada horay loo sii iibsaday iyo basaska qaada rakaabka badan ayaa ka jaban, halka safarada habeenkii, safarada fasaxa / fasaxa, safarada socodka iyo basaska kuraasta kayar (iyo kuwa raaxada leh) ay ka qaalisan yihiin.
Sida caadiga ah suulka, qiimaha safarka ee usbuuca u dhexeeya Tokyo iyo Osaka wuxuu maraa qiyaastii ¥ 4000-6000 qofkiiba maalintii, iyo kudhowaad ¥ 5000-8000 qofkiiba safarada habeenki. Carruurtu badanaa waxay bixiyaan kalabar qiimaha dadka waaweyn.
Laba ka mid ah wadayaasha basaska waaweyn ee u kala goosha Tokyo iyo Osaka ayaa kala ah Willer Express iyo JR Bas. Tigidhada dhammaan xambaarayaasha guud ahaan waxaa laga iibsan karaa meelaha laga baxo ee waaweyn, sidoo kale waa la iibsan karaa (iyadoo laga helayo caawimaad luqadeed Jabbaan ah) dukaamada ku yaal dukaamada ku habboon.
Willer Express waxay socotaa safarro maalin iyo habeen ah oo leh xulashooyin kala duwan oo fadhiga ah oo ka bilaabma kuraasta caadiga ah ilaa kuraasta qolofka raaxada leh. Safarada basaska waxaa laga dalban karaa internetka oo Ingiriis ah, iyo Willer's Japan Bas Bas ah waxay ansax ku tahay dhammaan jidadkooda marka laga reebo qaar. Basaska Willer ee Tokyo ayaa ka tagaya Saldhigga Baska weyn ee Shinjuku (Busta Shinjuku), oo ka sarreeya raadadka JR ee Saldhigga Shinjuku, oo ay u adeegaan inbadan oo ka mid ah JapanWadayaasha basaska waaweyn. Willer sidoo kale waxay tikidhada u iibisaa wadayaasha basaska kale websaydhkooda, laakiin safaradaani kuma ansaxsana kuwa Willer Japan Baska Baska.
JR Bas Boos celin ayaa lagu sameyn karaa Ingiriis iyadoo loo marayo Kousoku Bas Net websaydhka. Waxa kale oo aad boos ka sii qabsan kartaa saldhigyada tareenka isla daaqadaha tikidhada "Midori-no-Madoguchi" ee loo isticmaali jiray in lagu keydiyo kuraasta tareennada. Basasku way ka baxaan Saldhigga Tokyo - Bixitaanka Yaesu (八 重 洲 口) iyo ka Busta Shinjuku.
Qiimo aad u sareeya, Kanto Bus iyo Ryobi Bus ayaa ku shaqeeya Hurdo Hurdo. Basku wuxuu qaadaa kaliya 11 rakaab ah, mid walbana waxaa loo qoondeeyay kursi fadhiisanaya qolal yar yar oo gaar ah oo leh albaabbo qarsoodi ah. Ka shaqeynta inta udhaxeysa Ikebukuro Station ee Tokyo iyo OCAT ee Namba, qiimaha ayaa laga bilaabayaa 18000 15000 si kasta oo tikidhada waxaa looga dalban karaa khadka tooska ah ee Ingiriiska. Qiimaha iibsiga hore ee ¥ XNUMX ayaa la bixiyaa, laakiin kuwaa waxaa laga iibsan karaa oo keliya khadka internetka ee Jabbaan.
Laga soo bilaabo Gobolka Yamaguchi
Baska Bocho wuxuu bixiyaa baska habeenkii laga helo magaalooyinka Hagi, Yamaguchi, Hofu, Tokuyama, iyo Iwakuni ilaa Kobe iyo Osaka. Waxay ku kacaysaa inta udhaxeysa 6300 9480 iyo 7 55 tikit hal dhinac ah, waxay kuxirantahay meesha aad ka dagto iyo meesha aad ka degto. Basku wuxuu ka tagaa Hagi Bus Center 7:15 PM habeennimo, wuxuuna yimaadaa saldhigga Osaka 10:05 AM maalin walba. Basku wuxuu safar soo noqosho ah ka sameeyaa saldhigga Osaka 9:25 PM habeennimo, wuxuuna yimaadaa xarunta basaska ee Hagi XNUMX:XNUMX AM maalin kasta. Faahfaahin buuxda oo ay kujiraan tikidhada safarka wareega waxay ku jiraan websaydhkooda. Waa heshiis wanaagsan haddii aad haysato waqti aad ku dhaafto.
Terminal-ka Duulimaadka Caalamiga ah ee Osaka waa gudaha Kankō (南港) Aagga Osaka Bay. Ma jiraan bangiyo, xafiiska boostada, dukaamo, ama maqaaxiyo ku yaal terminalka. Saldhigga dhulka hoostiisa mara ee kuugu dhow waa Xarunta Cosmosquare (C11), oo qiyaastii u jirta 15 daqiiqo socod u jirta boosteejada. Bas bas bilaash ah ayaa laga heli karaa saldhigga. Tagaasida sidoo kale waxaa laga heli karaa saldhigga.
Helitaanka Terminalka Doonta
Laga soo bilaabo Saldhigga Suminoe-koen (U Qaado Tramka Cusub Nankōguchi (南 港口)).
Laga soo bilaabo Saldhigga JR Shin-Osaka (Shinkansen Line) (JR Shin-Osaka Station → u wareejinta Subway Midosuji Line (Red Line) Shin-Osaka Station (M13) → Hommachi Station (M18) → u wareejinta Subway Chuo Line (Green Line) station Cosmosquare station (C10)). Waqtiga safarka: ugu yaraan 40 daqiiqo Saldhigga Cosmosquare. ¥ 310.
Laga soo bilaabo Namba (Subway Midosuji Line (Red Line) ee Saldhigga Namba (M20) → Hommachi Station (M18) → u wareejinta Subway Chuo Line (Khadka Cagaaran) → Cosmosquare Station (C10)). Waqtiga safarka: ugu yaraan 30 daqiiqo Saldhigga Cosmosquare. ¥ 270.
Laga soo bilaabo Tennoji (Subway Midosuji Line (Red Line) ee Saldhiga Tennoji (M23) Station Hommachi Station (M18) → u wareejinta Subway Chuo Line (Khadadka Cagaaran) Station Cosmosquare Station (C10)). Waqtiga safarka: ugu yaraan 40 daqiiqo Saldhigga Cosmosquare. ¥ 310.
Taksi ahaan (Waxaad ku amraysaa taksiilaha inuu ku geeyo Terminal-ka Caalamiga ah ee Xeebta ee Osaka Port (Nanko) - haddii kale, waxaa lagu geeyn karaa boosteejada laga raaco doonyaha gudaha.).
By baabuur (ka baxa Hanshin Expressway Tenpozan bixitaanka ilaa Port of Osaka ka dib markaad ka gudubto Tunnelka Osakako-Sakishima, bidix bidix isgoyska hore, oo raac wadada.). ¥ 200 baabuurkiiba gawaarida wadada.
Khadka PanStar wuxuu ka shaqeeyaa markab u dhexeeya Osaka iyo Busan. Doontu waxay ka tagtaa Isniinta, Arbacada, iyo Khamiista, 3:10 PM oo Osaka iyo Busan labadaba waxayna imaanaysaa maalinta xigta 10AM. Magaalada Busan, waqtiga hubinta shandadaha ayaa kahoreysa waqtiga soosocodka rakaabka: marka lasoco Busan-Osaka, hubinta boorsooyinka waa 12:40 PM-2PM iyo jeegga rakaabka ee waqtiga waa 2:15 PM - 2:45PM; socodka Osaka-Busan, hubinta shandadaha waa 1 PM-2PM iyo jeegga rakaabka ee waqtiga waa 1 PM-2:30PM. Fursado badan oo kala duwan oo qolka ah ayaa la heli karaa, oo ay ku jiraan qolalka qoyska. Siciraduhu waxay ka bilowdaan ¥ 17,000 waxayna u dhexeeyaan illaa 250,000 fasal oo kala duwan oo qolal / suite ah oo ku dhammaada Suite-ka Madaxweynaha, oo ah ¥ XNUMX habeenkiiba. Tigidhada waxaa laga iibsan karaa khadka tooska ah, laakiin in badan oo ka mid ah waxyaabaha ku jira websaydhka waxaa lagu heli karaa oo keliya Jabaaniis iyo Kuuriyaan, wayna adkaan kartaa in loo maro dadka ku hadla Ingiriisiga. Tigidhada si fudud ayaa looga heli karaa wakiillada ku takhasusay safarka Kuuriya ama Jabbaan.
Doonta waxay qabataa bandhigyo muusig oo toos ah, bandhigyo sixir ah, iyo madadaalo kale oo baxsad ah. Jadwalku wuu kala duwan yahay.
Waad ku raaci kartaa gaarigaaga doonta, laakiin waxaa jira shuruudo dukumiinti, waana inaad hubisaa bogga internetka wixii macluumaad ah. Qiimaha hal qol oo aasaasi ah iyo gaari waa 690,000 XNUMX. Cusbooneysiinta qolka waa la heli karaa. Caymiska ku meelgaarka ah waa in laga iibsadaa dekedda markii uu Osaka yimaado.
Shiinaha-Japan International Ferry Co. waxay ka waddaa magaalada Shanghai doon, Shiinaha dhowr jeer bil kasta. Doontu way kala duwan tahay Osaka iyo Kobe oo u dhow.
Kansai Safarka: Sahaminta Gobolka Osaka & Kansai:
Haddii aad qorsheyneyso inaad ka safarto meel ka baxsan xadka magaalada waxaa laga yaabaa inaad ka fiirsato inaad tikidhada ka isticmaasho Surutto Kansai. Si loogu isticmaalo Osaka iyo magaalooyinka kale ee galbeedka Japan, waxaa jira tigidhada kale ee waxtarka leh.
Kaarka casriga ah ee ICOCA. Kaadhadhkan dib loo buuxin karo waxaa loo isticmaali karaa tareenka, tareenada dhulka hoostiisa mara iyo shabakadaha basaska ee deegaanka Kansai, Okayama, Hiroshima, Nagoya (Kintetsu) iyo Kyoto (JR West). Kaararkaas waxaa laga heli karaa mashiinnada wax lagu iibiyo ee xarumahan tareennada laga raaco. ¥ 2000, oo ay kujirto lacag celin ¥ 500 oo deebaaji ah iyo credit 1500 oo ah safarka safarka.
Xadid Xadidan Tareenka Kintetsu (Iibsasho Xarunta Diyaaradda ee Wakaaladda Socdaalka ee Kansai ee ku taal Madaarka Caalamiga ah ee Kansai.). Kaarkaan wuxuu ku fiican yahay safarka aan xadidneyn ee ka socda gobolka Kansai 5 maalmood oo xiriir ah. Gobolka Kansai wuxuu daboolayaa Kyoto, Nara, Nagoya, Mie, iyo inbadan. ¥ 3700.
Kintetsu Khadka Weyn ee Wide (Iibsasho Xarunta Diyaaradda ee Wakaaladda Socdaalka ee Kansai ee ku taal Madaarka Caalamiga ah ee Kansai.). Kaarkaani wuxuu lamid yahay kan aan xadidneyn ee Kintetsu Railway Pass, laakiin waxaa kujira aagag yar oo dheeri ah sida marinka wareega ee loo wada dhanyahay ee laga helo Kansai Airport ilaa Osaka's Uehommachi iyo dib ugu noqoshada garoonka diyaaradaha iyo raacida aan xadidneyn ee basaska Mie Kotsu ee aaga Ise-Shima iyo qiimo dhimis foojarro. ¥ 5700.
Osaka Pass aan xadidneyn. Kaarkaani wuxuu ku yimaadaa laba nooc. Kaarka hal-maalin wuxuu bixiyaa adeegsiga aan xadidnayn ee tareennada (marka laga reebo tareenada JR) iyo basaska ku socda Magaalada Osaka iyo meelaha u dhow, iyo sidoo kale gelitaanka bilaashka ah ee 24 xarumood oo caan ah iyo sidoo kale qiimo dhimis meelaha qaar ka badan. Kaadhka labada maalmood ah wuxuu ku xaddidan yahay dhulka hoostiisa iyo khadadka basaska magaalada. Labada noocba waxay la yimaadaan buug yar oo anfacaya oo wata talo soo jeedinno, tigidhada iyo macluumaad badan oo ku saabsan dhammaan boggaga. Haddii aad qorsheyneyso inaad booqato qaar ka mid ah boggaga ugu qaalisan ee lagu daray bilaash baasaboorka, sida Observatory-ka sabeynta ee Umeda oo keligiis xamuulkiisu yahay ¥ 700, tigidhkan wuxuu noqon karaa mid dhaqaale. Transit-ka ayaa qaadan kara waqti dheer, sidaa darteed waa xikmad in la sameeyo qorshe ka hor intaadan iibsan kaarkaan. In kabadan boqol yen oo dheeraad ah waxaad heli kartaa nooc dheereyn ah oo kaarkaan ah oo ay kujiraan safarka tareenka ee Osaka iyo dib ugalaabashada dhammaan magaalooyinka ku xeeran. Hal maalin oo baas ah ¥ 2000, laba-maalin pass ah ¥ 2700.
Tareenka dhulka hoostiisa mara iyo baska hal maalin mara. Tigidhada 'Osaka Visitors' (dadka waaweyn ¥ 850, carruurta ¥ 430) waxay ku bixisaa safar maalinle ah oo aan xadidnayn dhammaan tareennada dhulka hoostiisa mara, basaska, taraamka cusub waxaana ku jira qiimo dhimis yar oo magaalada ah. The "Osaka Amazing Pass" waxay bixisaa lacag la'aan lagu daro dhowr soojiidasho, halka "Osaka Kaiyu" (dadka waaweyn kaliya ¥ 2300) ay kujirto tikidhka Osaka Aquarium Kaiyukan (¥ 2550 / ¥ 1300).
Kaadh Qaadasho Badan. Kaadhkan waa la isticmaali karaa illaa inta qiimahiisu dhacayo (¥ 3300). Waxay kufiicantahay tareenada dhulka hoostiisa mara, basaska, iyo taraamka cusub. ¥ 3000.
The Wadada tareenka ee Osaka is JapanShabakada labaad ee tareenka ee ugu balaaran Tokyo kadib, taasoo kadhigeysa dhulka hoostiisa habka dabiiciga ah ee lagu wareego. Ku Khadadka Midosuji waa halbowlaha weyn ee Osaka, oo isku xiraya xarumaha waaweyn ee tareenada iyo dhismooyinka ganacsiga Shin-Osaka, Umeda, Shinsaibashi, Namba iyo Tennoji.
Calaamadaha, tikidhka iyo hawlgalka tareenka dhulka hoostiisa mara ee Osaka waxay la mid yihiin dhiggeeda weyn ee Tokyo. Qiimaha ¥ 200-350, waxay kuxirantahay masaafada. Imaanshaha saldhigyada waxaa lagu soo bandhigayaa oo lagu shaaciyey Jabaaniis iyo Ingiriisi Hayso tigidhkaaga markaad tareenka soo gasho - waa loo baahan yahay markaad ka baxdo.
Run magaceeda, the JR Osaka Loop Line (環状 線 Kanjō-sen) wuxuu ku socdaa wareegga wareegga Osaka. Maaha wax ku habboon ama aad loo isticmaalo sida Tokyo's Yamanote Line, laakiin waxay ku joogsataa Umeda iyo Tennoji, iyo Osaka Castle. Namba iyo Istuudiyaha Universal Japan waxay kuxiran yihiin xariiqa Loop adoo adeegsanaya gaagaaban. Qiimaha ¥ 120-250, waxay kuxirantahay masaafada.
Dad badan oo degan waxay ku wareegaan baaskiil, maaddaama magaaladu inta badan tahay mid deggan oo si fudud baaskiil loogu maro. Raacitaanka waddooyinka dhinaceeda waa la oggol yahay oo waddooyinka qaar ayaa xitaa leh haad baaskiil lagu calaamadeeyay. Haddii aan waxba la calaamadeynin, iskuday inaad bidix u taagnaato halka ay suurta gal tahay (laakiin badanaa waxaad si fudud ugu baahan tahay inaad ka hesho wadada ugu fiican ee aad mari karto dadka lugeynaya).
Baaskiilado kiro ah ayaa la heli karaa, laakiin haddii aad sii joogto in ka badan dhowr toddobaad, iibsashada baaskiil la isticmaalay wuxuu noqon karaa heshiis wanaagsan. Helitaanka baaskiil la isticmaalay ayaa noqon kara waxoogaa khiyaano ah, si kastaba ha noqotee, gaar ahaan haddii aadan ku hadlin Jabbaan. Liistada Craigs iyo bogagga internetka sida Gaijinpot.com waxay leeyihiin liisasyo kala duwan, waxaana ku yaal dukaamo yar yar oo baaskiil ku wareegsan. Renge, oo ku dhow Osaka Castle, waxay iibisaa baaskiilado badan oo la isticmaalay oo ka bilaabmaya qiyaastii ¥ 5500.
Waxaa lagaa doonayaa inaad baaskiilkaaga ka diiwaangeliso booliska. Baaskiilada lagu diiwaangeliyo magac aan ahayn kan fuushan ayaa loo qaadan karaa in la xaday, iyo xatooyada baaskiilku ma ahan wax aan caadi ahayn. Dukaamada Baaskiilku waxay kaa caawin karaan habka diiwaangelinta fudud.
Guud ahaan waa fikrad xun in baabuur loo adeegsado booqashada Osaka. Wadooyin badan ma laha magacyo, calaamadaha badanaa waxay ku qoran yihiin oo kaliya Jabbaan, khidmadaha baarkinkana waa xiddigiska. Intaa waxaa dheer, shatiga darawalnimada caalamiga ah ayaa loo baahan yahay.
Osaka wuxuu leeyahay lahjad gaar ah oo Jabbaan ah, taas oo ay doorbidayaan majaajiliisteyaal badan oo caan ku ah dhaqanka Jabaan. Lahjadda Osaka dhaqan ahaan waxay la xiriirtaa fasalka baayacmushtariga, sidaasna waxaa tixgeliya dad badan oo Jabaaniis ah oo aad uga dhawaajin kara marka la barbar dhigo Jabaanka caadiga ah. In kasta oo guud ahaan aysan dhibaato ku ahayn dadka ku hadla afka Jabbaan, haddana way adkaan kartaa in la fahmo haddii aad hadda bilowday barashada Japanese. Dhammaan dadka deegaanka ee aan waayeelka ahayn waxay awoodaan inay ku hadlaan oo ay fahmaan Jabaaniga caadiga ah in kastoo, markaa haddii aadan fahmin, si edeb leh uga codso inay ku celiyaan naftooda japaniska caadiga ah (hyōjungo 語) waxayna badanaa ku qasbi doonaan.
Sida inta badan magaalooyinka kale ee waaweyn ee Jabbaan, Ingiriisiga waxaa looga hadlaa meelaha waaweyn ee dalxiiska iyo hoteelada waaweyn ee caalamiga ah, laakiin si kale looma hadlo.
Maxaa la arkaa oo la sameeyaa
Aragtida Osaka ee ugu caansan waa Qalcadda Osaka. In kasta oo ay tahay dib-u-dhis, way qurux badan tahay oo waxay leedahay baarkin fiican. Si aad wax badan uga barato taariikhda Osaka, waxaad aadi kartaa meesha kuugu dhow Matxafka Taariikhda ee Osaka.
The Matxafka Sayniska ee Osaka on Nakanoshima waa xarun waxqabad oo isdhaxgal leh oo leh planetarium iyo shineemo.
Dhismaha Umeda Sky waa dhisme qaab qaab la yaab leh leh sagxad lagu fiirsado iyo wiish sare oo laga laalay inta u dhexeysa labada dhisme ee hawada sare. Waxay u dhowdahay saldhiga Osaka.
The Macbadka Sumiyoshi waa koonfurta bartamaha magaalada. Waa mid ka mid ah meelaha Shinto ee ugu da'da weyn Shinto wuxuuna leeyahay qaab dhismeed aan caadi ahayn. Waxa kale oo ay caan ku tahay buundo dul marta balli.
The Japan reexaanta waxay ku taalaa Osaka waxayna si gaar ah caan ugu tahay wadada tunnelka ubaxa cherry dhow, oo ah barta koowaad ee lagu arko ubaxa cherryka sanadlaha ah.
The Tsūtenkaku munaarad caan ah oo ku taal aagga Shinsekai oo leh barxad lagu fiirsado oo dhererkeedu yahay 91 mitir.
The Macbadka Shitennōji waxay u dhowdahay xarunta Tennōji. Waxaa loo arkaa inay tahay macbudkii ugu horreeyay ee Buddhist-ka ee ku yaal Japan oo taariikhdiisu ahayd qarnigii 6aad. Dhismaha macbudka maanta hase yeeshe, waa dib u dhis.
In Ryokuchi Park waa Madxafka Hawada Furan ee Guryo-Beeleedyadii Hore, aruurinta beeraha xilliyada Edo. Tani waxay siinaysaa aragti wanaagsan nolosha dadka caadiga ah muddadan. Waa waqooyiga bartamaha magaalada.
The Matxafka Kamigata Ukiyoe ee Namba waxaa loogu talagalay ukiyoe, Daabacaadda alwaaxda Japan.
Kaiyadda (海 遊 館) (Osakako, Khadka Chuo). Kani waa mid ka mid ah aquarium-yada adduunka ugu waaweyn, oo leh 11,000 tan oo biyo ah iyo xayir badan (oo ay ku jiraan nibir badeed), hoonbarro, otter, shaabadood, iyo xayawaanno kale oo badeed. Haanta ugu weyn, oo mataleysa Badweynta Baasifigga oo leh 5,400 tan waa wax aan ka badneyn. Dhammaadka usbuuca, muusikiistayaasha iyo jilayaasha jidadka waxay siiyaan madadaalo dheeri ah dadka ka baxsan aquarium-ka. Dadka waaweyn ¥ 2,300, carruurta ¥ 1,200.
Tenpozan Ferris Wheel (Ku xigta Kaiyukan aagga Tempozan.). 10 AM-10PM. Waxa kale oo jira Matxafka Suntory, suuq ganacsi iyo deked doonyaha lagu soo dalxiis tago. Suuqa ayaa leh dukaamo kaladuwan oo kaladuwan oo loogu talagalay fashionistas, otaku, dalxiisayaasha, ama eyga jecel, kala duwanaansho. Suuqa ayaa labanlaabmaya nooc ka mid ah baarkinka madadaalada, oo leh gantaal Ferris ah, heshiiska ugu fiicanna waa in doonta laga soo qaado halkaas oo la geeyo Universal Studios biyaha oo dhan. ¥ 700, carruurta ilaa 3 sano jir bilaash ah.
Tartanka Weyn ee Guga Sumo (相撲 春 場所) (Osaka Prefectural Gymnasium, oo 10 daqiiqo socod ah oo ka socota joogsiga tareenka ee Namba.). Tartanka Osaka ee isboortiga qaranka Japan, legdanka sumo, waxaa badanaa lagu qabtaa bartamaha Maarso sanad walba Osaka Prefectural Gymnasium. Ka hubi jadwalka iyo helitaanka tikidhada bogga rasmiga ah ee Nihon Sumo Kyokai. 3000-14,300 ¥.
Universal Studios Japan (Saldhigga Universal-City ee Khadka JR Yumesaki, 10 daqiiqo Osaka). Jardiinada labaad ee ugu weyn Japan. Ka filo in badan oo Jaban ah oo aad soo jiidaneyso jilayaasha iyo filimada aad ugu jeceshahay. (Haddii aad halkan uga imaaneyso safar dhinaca socdaalka ah oo ka imanaya Tokyo Disney Resort, fiiri qeybtaas ka bax qaybta macluumaadka ee ku saabsan sida loo yimaado halkanna ugu laabo Tokyo isla maalintaas.) Tigidh hal maalin ah oo loogu talagalay dadka waaweyn ¥ 6,980, carruurta ¥ 4,880.
Umeda Joypolis Sega (ョ イ ポ リ ス) (ku xigta xarunta Umeda (Osaka)). 11 AM-11PM. Waxay qabsatay dabaqyadii 8aad iyo 9aad ee Goynta shanaad wax ku dhisaya arcadooyin iyo giraangir Ferris ah xagga sare. Shuruucda maxalliga ahi waxay mamnuucayaan in carruurtu halkan yimaadaan wixii ka dambeeya madowga xataa iyagoo la jooga waalidkood, markaa haddii aad rabto inaad carruurta kaxaysato, qorshee inaad hore u sii socoto. HEP5 Ferris waa caadi laakiin. -500 600-XNUMX soojiidasho.
Dunida Spa (Waxyar uun udhow Tsutenkaku Tower ee Shinsakai, oo laga heli karo saldhigga JR Shin-Imamiya). saacadood 24. Meelaha Yurub iyo Aasiyaanka ku saleysan ee jinsiga iyo saunada iyo sidoo kale barkad loogu talagalay qoyska oo leh bogag iyo madadaalo (ha iloobin dogobbadaada dabaasha). Furan 24 saac markaa waa ay fiicantahay haddii aad ku xayiran tahay hoyga ama aad ka xiran tahay hudheelkaaga ka dib habeenki magaalada, kaliya iska bixi, u beddelo dharka guud ee cudbiga oo u gudbi mid ka mid ah maqaar gacmeedkooda jilicsan oo leh busteyaal badan. sida aad jeceshahay. Isku day banaanka onsen (isku day inaadan ku gubanin qorraxda) ama ku daawan TV-kooda waaweyn baarkooda biir qabow. Jimicsiga sidoo kale waa laguu heli karaa iyada oo qayb ka ah khidmadda gelitaanka. “Rollover” ee marinnada maalinlaha ah waa 9AM barta ay ku taal. Iska ilaali heshiisyada gaarka ah ee ¥ 1000 ee la bixiyo mararka qaarkood, badiyaa bisha Maarso. Waa hagaag in aad galab ku qarashgareyso halkan. Dadka leh tattoos, joogto ah ama ku meel gaar ah, ayaa laga mamnuucay inay isticmaalaan xarumaha. 2400 3 2700 saacadood, ¥ 1300 maalintii oo dhan; lacag dheeri ah ¥ 5 oo ah joogitaannada saqda dhexe-XNUMXAM.
Tiyaatarka Qaranka Bunraku (文 楽 劇場 (Kokuritsu Bunraku Gekijō)) (Nippombashi.). Mid ka mid ah meelaha ugu dambeeya adduunka halkee bunraku, oo ah qaab tiyaatarka jilicsan ee jilicsan oo ka yimid xilligii Edo, ayaa si toos ah looga arki karaa. Boombalooyinka waaweyn, oo u baahan min saddex hawl wade, waxaa weheliya muusig dhaqameed iyo sheeko, waxayna matalaan riwaayado waaweyn oo Jabaan ah 1600s iyo 1700s. Qoraallada Jabbaan iyo qoraallada ku qoran Ingiriisiga ayaa la bixiyaa.
Tiyaatarka Musiga ee Osaka Shiki (G 団 四季 (gekidan shiki)) (gudaha Herbis ENT, Umeda). Hoyga Shirkadda Tiyaatarka Shiki, soo jeedinta riwaayado iyo muusigyo.
Zepp Namba (bari ilaa saldhigga Daikokucho). Naadi pop ah.
Billboard Live Osaka (ビ ル ボ ー ド ラ イ ブ 大阪). Naadi jazz ah, oo hore loo odhan jiray "Blue Note Osaka".
Naadiga Magaalada, Hyatt Regency Osaka Hotel, 1-13-11 Nanko-Kita, Suminoe-Ku , ✉ baadhitaan.hrosaka@hyattintl.com. Isbooris.
Hoolka xafladda ee Nakanoshima, oo u dhow Umeda, iyo hoolka suugaanta Umeda waxay martigalisaa xaflado casri ah oo casri ah, halka Umeda Koma gudaha Umeda, iyo Shin-Kabukiza gudaha Uehommachi Enka bandhigyo. Muusikada madaxbanaan ama dhulka hoostiisa ah, iskuday Hoolka mooska gudaha Umeda ama Bisad weyn gudaha Amerika-mura.
ROR Majaajilo (agagaarka xarunta Namba Yotsubashi iyo khadka Mido-suji, sidoo kale Horie iyo Doutonbori) ✉ edd@rorcomedy.com. Guri-ciyaareedka majaajillada taagan ee af-Ingiriisiga.
Shaqada inta badan dadka degan Mareykanka, reer Yurub iyo Australiyaanku waxay barayaan Ingiriisiga (sida dhacda inta badan Japan). Waxa kale oo jira arday fara badan oo caalami ah iyo shaqaale ka shaqeeya jaamacado kala duwan oo ku yaal Osaka. Dhaqaalaha gobolka Osaka wuxuu ahaa mid fadhiid ah marka loo eego Tokyo: inkasta oo ay jiraan shaqooyin xaga sharciga, dhaqaalaha, xisaabaadka, injineernimada iyo qaybaha kale ee xirfadeed ee Osaka, baahida loo qabo aqoon yahanada ajaanibta ah waxay u badan tahay inay ka sareeyaan Tokyo (sida mushaharku yahay). Osaka wuxuu leeyahay dhowr daabiciyeyaal waxbarasho oo shaqaaleysiiya shaqaale ajnabi ah, laakiin shaqooyinkani waxay u baahan yihiin karti luqadeed Japan ah oo hufan. Shaqo ku meelgaar ah oo warshado kala duwan leh ayaa la heli karaa.
Degmada ugu caansan ee wax iibsiga ee Osaka ayaa ah Shinsaibashi (心 斎 橋), oo bixisa iskudhaf dukaamo waaweyn oo waaweyn, dukaamo naqshadeeyayaal reer galbeed ah oo heer sare ah, iyo dukaamo madaxbanaan oo u dhexeeya raqiis ilaa qaali. Shinsaibashi dhexdiisa, ayaa Ameerika-mura (ア メ リ カ 村, inta badan lagu soo gaabiyo "Amemura") ama "American Village" aagga ayaa si gaar ah caan ugu ah dhalinyarada, waxaana badanaa la sheegaa inuu yahay isha ugu badan ee isbeddelada moodooyinka dhalinyarada ee Japan. Galbeedka Amerika-mura, Horii (堀 江) waa goob laga dukaameysto oo leh dukaamo jaban oo japan ah, oo udub dhexaad u ah Tachibana-dori (oo badiyaa loo tarjunto Orange Street).
Dukaammada badan ee ku yaal Umeda ayaa sidoo kale caan ku ah dadka xaafadaha ku dhaqan, gaar ahaan kuwa Goynta shanaad iyo Hep Navio dhismayaasha ku dhagan Saldhigga Hankyu Umeda, in kasta oo dukaannadani ay qaali yihiin oo soo jiidan karaan inta badan xiisaha dalxiisayaasha. Tusaale ahaan, dhismayaasha "E-ma" ee ku ag yaal bakhaarka weyn ee Hanshin, iyo "Nu-Chayamachi" (Nu 茶屋 町) oo ku dhow saldhigga Hankyu Umeda.
Wixii elektiroonig ah, ka Nipponbashi (日本 橋) aagga koonfur-bari ee Namba, iyo gaar ahaan waddada wax lagu iibiyo ee "Den-Den Town", ayaa mar loo tixgeliyey inay tahay Akihabara ee galbeedka Japan; maalmahan, dad badan ayaa doorbidaya inay wax ka iibsadaan cusub, oo aad u weyn Kaamirada Yodobashi (ヨ ド バ シ カ メ ラ) Umeda ama BicCamera (ビ ッ ク カ メ ラ) iyo LABI1 ee Namba, in kasta oo Nippombashi wali ay bixiso heshiisyo wanaagsan oo ku saabsan qalab badan, qaybaha PC-ga iyo qalabka elektaroonigga ah ee la isticmaalay / cusub.
Buugaagta Jabbaan iyo ajaanibta ah, iskuday Kinokuniya gudaha Hankyu Umeda Station, ama Junkudo koonfurta Saldhiga Osaka.
Rasmiga Hanshin Tigers (kooxda baseball) Dukaanku wuxuu ku yaal dabaqa 8-aad ee Dukaanka Waaxda Hanshin ee Umeda.
Tenjinbashi-suji Wadada Dukaameysiga (天神 橋 筋 商店 街) Tenjinbashi-suji Shōtengai) waxaa lagu sheegaa inuu yahay midka ugu dheer ee toosan uguna dedan dukaamaysiga gudaha Japan qiyaastii. Dherer dhan 2.6 km Arcade wuxuu marayaa woqooyi-koonfur wadada Tenjinbashi-suji, waxaana laga heli karaa tareenno dhulka hoostiisa mara iyo / ama saldhigyo JR ah, tusaale Tenma, Minami-Morimachi, iyo Tenjinbashi-suji 6-chome. Waxba looma jeedin indho indheynta, arcade waa bandhig toos ah oo nolol maalmeedka Osaka ah, oo furan ilaa xilligii Edo.
Cimilada dhexdhexaadka ah ee Osaka waxay keentaa xagaa kulul oo qoyan, oo ay ku dhameystiran yihiin tiro duufaanno ah iyo kuleyl kuleyl ah ama labo si ay u sii ahaato mid xiiso leh. Badanaa tani waxay dhacdaa bilaha Juun iyo Julaay, ka dib dhawr toddobaad oo nasasho ah, way sii socotaa inta lagu jiro bisha Sebtember. Waqtiga ugu wanaagsan sanadka ee la booqdo Osaka waa xilliga guga - laga bilaabo Maarso ilaa bartamaha Abriil. Xaqiiqdii waa waqtiga ugu qurxoon sanadka in la booqdo, maadaama dhammaan jardiinooyinka lagu daboolay buste ubaxyo cherry ah.
Haddii aad qorsheyneyso inaad soo booqato wakhti kasta laga bilaabo dhammaadka Abriil ilaa bilowga Maajo, waxaad nasiib u yeelan doontaa inaad la kulanto Cherry Blossom Festival iyo sidoo kale Toddobaadka Dahabiga ah. Laakiin maxaa yeelay waa wax caan ah, yaan lagu kadsoomin inaad u malaynayso inaad ballansan karto daqiiqadda ugu dambeysa. Hubso inaad qorsheyso safarkaaga si aad horay usii qorsheyso oo hoteelkaaga waqti sii sii qabsato. Waxaa jira xaflado badan sanadka oo dhan, laakiin kani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan.
Waqti kale oo wanaagsan oo la tago waa bilaha Oktoobar illaa Diseembar. Heerkulka maalintii waa qabow ilaa fudeyd - qiyaastii 20 C maalintii, waxyarna hoos u dhacaya habeenkii. In kasta oo aanu dhab ahaan barafku ka jirin Osaka, haddana aad ayey u qabowdaa inta lagu jiro bilaha Janaayo iyo Febraayo.
Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta ee Osaka
Hoteelka Galbeedka ugu Fiican Fino Osaka Shinsaibashi
Hoteelka Galbeed ee Ugu Fiican Kansai
Hoteelka Galbeedka Joytel ugu Fiican Osaka
Hotel Ganacsi Ishibashi Osaka
Hotel Chisun Shinsaibashi Osaka
Degenaanshaha Fraser Nankai Osaka
Hotel Hearton Kita Umeda Osaka
Hotel Hearton Minamisenba Osaka
Hotel Hearton Nishi Umeda Osaka
Hotel Hearton Shinsaibashi Osaka
Hoteelka Hilton Osaka
Hotel Chuo New Lifaaqa Osaka
Hoteelka Chuo Osaka
Hoteelka Hankyu Expo Park Osaka
Hoteelka Ichiei Osaka
Hoteelka Osaka Bay Tower
Hotelka Mielparque Osaka
Huteel Cusub Osaka
Hotel Cusub Otani Osaka
Hotelka St Regis Osaka
Hotelka Westin Osaka
Hotel Toko City Shin Osaka
Hotelka Universal Port Osaka
Waxay kuxirantahay inta aad rabto inaad joogtid, waxaa jira dhowr ikhtiyaarro ah oo kaa caawinaya inaad kuhesho magaalada si raaxo leh oo fudud. Waad iibsan kartaa kaarka casriga ah ee ICOCA, oo ah kaar casri ah oo dib loo soo celin karo oo leh adeegsi lagu beddelan karo mid kasta oo ka mid ah tareenka, basaska ama shabakadaha dhulka hoostiisa mara meel kasta oo Kansai ah, iyo sidoo kale Hiroshima, Okayama, Tokyo iyo Nagoya. Waxaad ka soo qaadan kartaa mid kasta oo ka mid ah mashiinnada wax lagu iibiyo ee ku yaal saldhigyada tareennada.
Hadaad usbuuc un unboqoneysid, waxaad ubaahnaan laheyd inaad ku iibsato tikidh tareen aan xadidneyn Kintetsu. Bixinta safarka aan xadidnayn 5 maalmood oo isku xigta, tani waxay daboolaysaa shabakad ballaaran oo aagag ah.
Kaarka ugu wanaagsan ee soo booqde kasta waxay u badan tahay inuu yahay Osaka Unlimited Pass, oo ku yimaada hal iyo laba maalmood xulashooyin. Waxay bixisaa adeegsiga xulashada laakiin aan xadidnayn ee gaadiidka dadweynaha, iyo sidoo kale gelitaanka bilaashka ah ee goobaha caanka ah ee dalxiiska, foojarro qiimo dhimis ah iyo sidoo kale buug dhammaystiran oo ku saabsan soo-jeedinta dariiqa, macluumaadka iyo fikradaha meelaha la booqanayo.
Tareenka dhulka hoostiisa mara ee Osaka ayaa ka mid ah kuwa ugu waawayn dhammaan Japan, oo ku xigta Tokyo iyo calaamado ku qoran Ingiriis iyo sidoo kale Jabaan waa sahlan tahay in dhulka hoostiisa la maro. Kaliya xusuusnow inaad tigidhkaaga gacanta ku haysid maadaama lagu weydiin doono marka aad ka baxdo tareenka.
Haddii aad qorsheyneyso inaad sii dheeraato dhowr toddobaad, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad maal gashato baaskiil. Dhulku wuu fidsan yahay waana sahlan yahay in laga wada hadlo inta badan, dukaamada baaskiilkuna waxay kaa caawin doonaan inaad heshid oo aad diiwaangeliso baaskiilkaaga.
Waxaa jira xulasho aan caadi aheyn oo soojiidasho iyo aragti ah Osaka koox kasta oo da 'kasta ah iyo xiise kasta. Hop ka soo xoqida cirka, matxafyada, cibaado, macbudyo, qalcad 400 sano jir ah iyo mid ka mid ah aquariumyada adduunka ugu weyn. Haddayna intaas ku filnayn, waxaa jira xitaa Osaka Universal Studios oo runtii hubaal waa soo jiidasho adduunka oo dhan ku jirta xaqeeda. Waa kuwan qaar ka mid ah soojiidashada ugu sarreeya.
Matxafka Taariikhda ee Osaka waa bandhig cajiib ah oo taariikhda Osaka hodanka ku ah 1400 sano jir. Dabaq kastaa wuxuu muujinayaa xilli kala duwan oo magaalada ah, marka laga reebo dabaqa kore halkaasoo ay jirto madadaalo ku taal gudaha Qasriga Naniwanomiya. Matxafkan waa in la arkaa haddii aad booqaneyso magaalada, waxayna ku taal meel aad ugu dhow soo jiidasho kale oo xiiso leh - Osaka Castle Park.
Kormeerka Beerta Sabaynta waa mid ka mid ah kuwa gebi ahaanba neefta qaadanaya iyo goobaha cajiibka ah ee runtii aan runtii ahayn kuwa qalbi jilicsan si kasta ha noqotee. Waxay ku taalaa Umeda Sky Building cajiib ah, dhismaha 12-aad ee ugu dheer dhamaantiis Japan, kormeerku waa madal isku xirta labada 40 munaaradood ee dhaadheer ee saqafka sare. Aragtiyadu gabi ahaanba lama mid aha oo dhismuhu wuxuu noqday wax summad qaran ku leh. Inaad halkaa timaaddo ma xuma haddii aad tixgeliso 5ta dabaq ee ugu dambeeya ee kor u qaadaha kor u kacaa - wuxuu ka soo gudbayaa dhisme ilaa dhismo kale wuxuuna ku siinayaa dareen cabsi leh oo dul sabeynaya hawada. Waxa kale oo jira sagaaro dhulka hoostiisa ah oo loogu talagalay in lagu abuuro Osaka qarnigii 20aad. Raadi jardiinooyinka quruxda badan oo arag dhammaan astaamaha biyaha ee ka hooseeya dabaasha saldhigga dhismaha.
Qalcadda Osaka shaki la'aan waa mid ka mid ah meelaha ugu da'da weyn ee Osaka oo dhan. Isagoo door weyn ka ciyaaray taariikhda Japan qarnigii 16aad, wali wuxuu ka mid yahay qalcadaha ugu caansan dalka maanta. Soo jiidasho, riwaayad iyo gebi ahaanba ballaadhan, waa bandhig qumman oo ka mid ah kuwa ugu quruxda badan uguna xiisaha badan naqshadaha qaab dhismeedka ee ka horreeyay waqtigiisa Waxaa jira beero qurux badan oo ku wareegsan qalcadda oo ah meel wanaagsan oo lagu nasto oo lagu raaxaysto galab lala yeesho qoyska.
Haddii aad booqaneyso inta lagu gudajiray Bandhigga Cherry Blossom Festival jardiinada waxaa ka buuxay iibiyeyaal, muusikiisteyaal, meelihii cuntada lagu cuni jiray iyo damaashaadyo ka socda suuqa hawada furan. Qaybta ugu fiicanna, waa gelitaanka qalcadda lafteeda waa bilaash.
Matxafka Sayniska ee Osaka waa matxaf aan caadi ahayn oo muujinaya martida adduunka sayniska iyo tamarta. Iyada oo leh mid ka mid ah shaashadaha adduunka ugu weyn, tani waa hal safar oo loogu talagalay da 'kasta oo ay tahay in aan la seegin.
Osaka Aquarium ama Kaiyukan shaki la'aan waa mid ka mid ah aquariumyada badda ee ugu weyn adduunka. In ka badan 15 taangiyo, 580 nooc oo xayawaanada badda ah, ku dhowaad 5 iyo badh tan oo biyo ah, iyo in ka badan 30,000 oo xayawaan xiiso leh oo ka kala yimid dhammaan Xeebta Baasifigga ayaa ka dhigaya mid ka mid ah waa inay arkaan soo jiidashada Osaka. Xitaa waxay ku leeyihiin haad aad u weyn oo nibiriga ku jira taangiyadooda - oo ah kalluunka ugu weyn adduunka.
Masaajidka weyn ee Sumiyoshi Taisha waa kan ugu caansan dhamaan meelihii sanamyada 2000 ee Sumiyoshi Japan. Midkani kan ugu da'da weyn, wuxuu soo jiray Qarnigii 3-aad.
Osaka runti sumcad fiican kuma lahan meesha ugu wanaagsan ee laga iibsado dhammaan badeecooyinkaaga gaarka ah ee Jabbaan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad suuqa ugu jirto elektiroonigyo badan oo casri ah, alaabada carruurtu ku ciyaarto, dharka iyo waxyaabo kale oo aad u qurxoon nasiib baad ku jirtaa, laakiin xulashada farsamada gacanta ee dhabta ahi waa wax aad u xun.
Degmada dukaamaysigu guud ahaan waxay u qaybsan tahay laba aag - mid ku wareegsan saldhigyada Osaka iyo Umdea, iyo kan kale oo ku xeeran saldhigga Namba. Halkan labada dhinacba, waxaad ka heli doontaa degmooyin badan oo wax laga iibsado, arcad, tafaariiqleyaal, dukaamo waaweyn oo waaweyn iyo qaar ka mid ah dukaamada yaryar.
Meelaha ugu caansan ee laga dukaameysto waa Shinsaibashi. Halkan waxaad ka heli doontaa wax walba iyo in ka badan oo wax kasta ah - dukaamo badan oo naqshadeeyayaal heer sare ah oo ka imanaya galbeedka, dukaamo badan oo dharka lagu iibiyo, aad moodo, misig iyo qaali Laakiin sidoo kale waxaad ka heli kartaa dukaamo badan oo maxalli ah oo aad qaali u ah oo bixiya heshiisyo waaweyn oo ku saabsan elektaroniga, kombiyuutarada iyo aalado badan.
Haddii aad raadineyso dukaan buug duug ah oo caalami ah iyo sidoo kale buugaag Jabbaan ah, waxaa jira laba ikhtiyaar oo waaweyn - Kinokuniya oo jooga Saldhigga Umeda iyo Junkudo oo ku yaal Osaka Station. Aqalka Magaalada Osaka
Iyaga oo caan ku ah howlahooda cunto karin, waxaa jira meelo faro badan oo aad u wanaagsan oo wax laga cuno laguna raaxeysto cunnada maxaliga ah ee Osaka oo dhan, si aad u fara badan oo aysan macquul aheyn in la wada qoro. Mantraka Osaka wuxuu tilmaan siinayaa dhaqanka cuntada halkan. “Kuidaore” ama naftaada u cuno doqonnimo, waxay ku tusin doontaa inaad ku raaxeysaneyso iidda noloshaada. Adoo adeegsanaya xilliyeed iyo kaliya waxyaabaha ugufiican ee hareeraha kajira, waxaad ku raaxeysan kartaa qaar ka mid ah cunnooyinka badda ugu fiican iyo sidoo kale octopus, eel iyo xitaa sunta dilaaga ah iyo cunnada weyn ee afuufka ama fugu. Kadibna waxaa jira sushi maxalli ah oo lagu sameeyay wasakhdo alwaax laba jibbaaran ah - zushi iyo bur saliid leh sinjibiil, octopus iyo basasha guga - takoyaki.
Haddii aad miisaaniyad ku jirto, nasiib ayaad ku jirtaa; waxaa jira xamuullayaal dariiqyada wax ku iibiya kuwaas oo karbaashi kara heshiiska ugu badan ee afka lagu waraabiyo wax aan waxba tarayn. Waxaa jira waxyaabo badan oo laga doorto oo laga yaabo inaad kaliya isku daydo wax walba.
Markaa waxaa jira Okonomiyaki, ama DIY cunno qaabaysan oo aad ka heli karto qaar ka mid ah maqaayadaha yaryar, waxaana laga yaabaa inaad ku raaxeysato habka gaarka ah ee xiisaha leh ee aad isugu daydo qaar ka mid ah Japancuntada ugu macaan. Miisaska oo dhami waxay ku dhiseen taarikada kulul dhexda iyo markaad dalbato, waxaad ka heleysaa maaddooyinkaaga baaquli - gebi ahaanba ceyriin. Iyo haa, waxaa lagaa filayaa inaad adigu karsato. Hadaadan runta maarayn karin, shaqaaluhu badanaa way ku waajibin doonaan oo waxay ku siin doonaan gacan, waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad weydiiso.
In kasta oo nolosha habeennimo ee halkan Osaka laga yaabo inay tahay mid aan qariib ahayn sida aad ka heli karto Tokyo, waad ku farxi doontaa inaad ogaato inaad weli gebi ahaanba khariban tahay xulashada. Waxayna kuxirantahay waxaad raadineyso, waxaa jira madadaalo fara badan oo aad ku raaxeysan karto fiid kasta, haddii aadan cunin meel aad ubaahantahay oo aad ubaahantahay inaad ku laabato hudheelkaaga si aad u jiifsatid.
Degmooyinka Minami iyo Kita waxaa ku yaal baararka firfircoon iyo kuwa dabaaldegyada ah, baararka iyo goobaha lagu caweeyo, haddii aad raadineyso habeen halis ah oo magaalada aad uga baxdo, xoogaa qoob-ka-cayaar, muusig cod dheer iyo nalal dhalaalaya. wax gebi ahaanba ka duwan, oo aad booqanayso bisha Maarso, waxaad tikidhada ka heli kartaa mid ka mid ah 6-da tartan ee tartanka sumo qaran ee halkan lagu qabto. Fursadna u hel inaad awood u yeelatid inaad aragto waxa ku socda cayaartan legdinta leh ee aan caadiga ahayn.
Haddii aadan midkoodna daba socon oo aad jeceshahay inaad fiidkii la qaadato wax yar oo dhaqameed ah, xoogaa aamusnaan ah iyo wax dhaqan badan, markaa Osaka ma niyad jabi doono. Meel fog oo ballaaran oo caan ah ayaa looga yaqaanaa sida ugu wanaagsan ee lagu arko farshaxanka hiddaha iyo dhaqanka ee Japan, ama bunraku, waxaad ka heli kartaa tikidhada si aad u aragto bandhigyada ka socda Tiyaatarka Qaranka ee Osakad Waxaad sidoo kale ballansan kartaa inaad ku aragto kabuki halkan, ama Tiyaatarka Sho-chiku-za Kabuki, waxaana jira jadwal xiiso leh oo riwaayado ah iyo dhacdooyin kale oo dhaqameed sannadka oo dhan.
Cherry Tree Blossom Festival - Guga
Sannad kasta oo calaamadeeya bilowga xilliga gu'ga ee Osaka, iyo iyadoo magaaladu u qarxayso rooga Cherry Blossoms, waxaa jira xaflad la qabto laga bilaabo Maarso illaa iyo bartamaha Abriil. Beerta Osaka Castle Park waxaa caan ku ah inay tahay mid ka mid ah meelaha ugu caansan Osaka oo dhan si loogu daawado ubaxyada, beerta furan 24 saacadood waxaa ka buuxan baqaarro, waratada, durbaanleyda iyo xamuulka dadka halkan isugu yimaada si ay ula kulmaan damaashaadka. . Galitaanka baarkinka waa lacag la'aan oo xitaa waad soo geli kartaa oo fiirin kartaa ubaxyada habeenkii.
Shinno Matsuri Festival - Fall
Dhamaadka Nofeembar laba maalmood, waxaa la qabtaa xafladda Shinno Matsuri. Mid ka mid ah meelaha yaryar ee Sukunahikona waxaa buux dhaafin doona dadka imaan doona si ay ugu mahadceliyaan dabaaldeg, iyagoo xusaya munaasabaddan qiimaha badan ee 1822. Waxaa jiray faafitaan ballaaran oo daacuun ah waxayna dowladdu u qaybisay dhammaan dawooyinka daacuunka dadweynaha. Hadda waxaa loo tixgeliyey Meel Cibaadada Caafimaadka iyo Caafimaadka, tani waa mid ka mid ah ciidaha ugu muhiimsan Osaka. Markaad tagto, ha ilaawin inaad soo iibsato warqad yar oo jilicsan shabeel oo loogu talagalay inay kaa ilaaliso cudurrada.
Hotel Tower Kyoto Ma Xalaalbaa Mise Muslim Saaxiibbaa?
Central Hotel Hiroshima Ma Xalaalbaa Mise Muslim Saaxiibbaa?
eHalal Safarka Mart > News Latest > Japan > Tilmaamaha Socdaalka Xalaasha ee Osaka Olympic
Tilmaamaha Safarka ee Wuerzburg Xalaal